करिनासंगको बा'चा तो'डेर सैफअ'लीले बो'ले साराको प'क्षमा ! - Filmy News Portal Of Nepal
सुशान्त केसमा जबदेखि साराको नाम ड्र’ग्ससंग जोडिएर आयो त्यसदिनदेखि नबाब खा’नदानको पनि इ’ज्जत मा’टोमै मिलिरहेको छ । छोरी साराकै कारण आफुहरुको ई’ज्जत माटोमै मिलेको महसुस गरिरहेका साराका बाबु सैफअलि छोरी सारासंग रि’साएका छन् भन्ने खबर यतिबेला झु’टो साबित भएको छ ।
खबरका अनुसार बाबु सैफअलिले साराले आफुले भनेको न’मान्दाको नतिजाले नै अहिले एनसीबीले घरको ढोका ढकढक्याएको हो भनेर सैफ सारासंग रिसाएको भन्ने ख’बर ग’लत भएको बु’झिन आएको छ । यो भन्दा अगाडीका समाचारहरुमा सैफले छोरी सारालाई एक्लै छा’डेर करिना र छोरा तैमुरसंग गाउँको घरमा गएको भन्ने कुरा बा’हिरीएको थियो ।
त्यो साँचो पनि हो । तर, सैफले साराको साथ छो’डेको भन्ने खबर भने अहिले झु’ठो सा’बित भएको छ । खबरका अनुसार किनभने सैफले गाउँबाटै सारा र साराकी आमा अथता आफ्नी पुर्व पत्नि अमृतासंग लगातार एनसीबीको विषयलाई लिएर सम्पर्कमा रहेको बुझिएको छ ।
उनी छोरी र पुर्वपत्निसंग मात्र नभई साराकोलागी कानूनी सल्लाहाकारहरुसंग पनि लगातार रुपमा सम्पर्कमा रहेको खबर बाहिरीएको छ । खबर यो साँचो हो कि पत्नि करिनाले उनलाई सारालाई सहयोग गरेको खण्डमा आफुले डिर्भोस दिने ध म्कि दिएकी थिईन् ।
तर, बाबु बाबु नै हुन् । कसरी ब’स्न सक्थे र ? छोरीलाई यस्तो हालतमा एक्लै छाडेर आफु कान्छि श्रीमतीसंग मस्ति गर्न ? एउटा बाबुको हृदयले सैफअलीलाई त्यसो गर्न दिएन । अन्ततः करिनाले जति नै रोक्न चाहेपनि उनले छोरीलाई बचाउनका लागी आफ्नो सबै श’क्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सैफअलीको यो निर्णयलाई उनका प्रशंसकहरुले निकै नै उचित निर्णय गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन् भने छोरीलाई सहयोग गर्न दिनबाट एउटा बाबुलाई लाचार र विवस बन्न बाध्य हुने करिनाको व्य’वहारप्रति उनकै र सैफका फ्यानहरु रिसाएका छन् । – एजेन्सी